Maxkamadaynta Burcad Badeed Somali ah oo ka bilaabanaysa Paris,France – Radio Daljir
Maxkamadaynta Burcad Badeed Somali ah oo ka bilaabanaysa Paris,France
Maarso 28, 2016 3:10 b 0
Jariiban, 28, March, 2016-(Daljir)_7 Burcad-baddeed Soomaali ah ayaa lagu wadaa in berrito la soo taago Maxkamad ku taalla caasimadda dalka Faransiiska ee Paris, iyagoo ku eedeysan inay afduubteen Markab nooca Dalxiiska, isla markaana ay dileen Milkiilihii Markab iyo inay afduubteen Haweneydiisa.
Weerarka Afduubka ayaa la sheegay inuu bilowgii bishii September ee sannadkii 2011-kii ka dhacay Xeebaha Somalia, xilli ay Lammaanaha Faransiiska ku safrayeen doonidooda yar.
Eedeysanayaasha oo ay da’dooda u dhexeyso 25 ilaa 32 jir ayaa sheegtay inay horey u ahaan jireen Dareewal Taksi, Bolis iyo Kalluumeysato ama xitaa Xamaali.
Eedeysanayaasha ayaa laga yaabaa in lagu xukumo Xabsi Daa’im, marka laga reebo mid ka mid ah oo isaga aan la soo maxkamadayn doonin, kadib, markii uu ku waashay Xabsiga dhexdiisa.
Lammaanaha Faransiiska ee mid la la dilay, midna la qafaashay ayaa lagu kala magacaabi jirey Christian iyo Evelyne Colombo, kuwaasi oo hantidooda iska iibiyey, si ay u galaan safar-baddeed tamashleyn ahaa.
Lammaanahaasi ayaa la afduubtay, xilli ay ka soo ambabaxeen Dekedda magaalladda Cadan ee dalka Yemen, kuna sii jeedeen Xeebaha dalka Cummaan.
Markab laga leeyahay Jarmalka ayaa helay doonidaasi oo ay ka muuqdeen duleelo xabbadeed, dhiig iyo dhalooyin jajabay, iyadoo labo maalin kadibna Markab dagaal oo ay leeyihiin Ciiddanka Badda ee Spain ayaa arkay doonida oo ay ku tuhmeen inay Burcad-baddeeda leeyihiin.
Waxayna ka heleen Haweeney Farabsiis xaaskiisa oo dhaawacan, waxayna Ciiddanka qaadeen Hawlgal ay ku soo dileen 2 burcad-baddeed, isla markaana soo qabteen 7 kale.
Haweeneyda oo lagu magacaabo Evelyne Colombo waxay sheegtay inay Burcad-baddeeda dileen ninkeeda, kadibna ay maydkiisa ku tuureen Badda.
(DHAGEYSO) Madaxweyne Gaas oo xarun cusub dhagax dhigay
Ganacsade haysta Dhalashada Canada oo lagu Dilay magaalada Muqdisho